Wave Money ဖြင့် Free Fire မှာ Diamond တွေ ဝယ်လိုက်ပါ | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire Wave Money ဖြ...
Wave Money ဖြင့် Free Fire မှာ Diamond တွေ ဝယ်လိုက်ပါ
Wave Money ဖြင့် Free Fire မှာ diamond ကို ပိုမို လွယ်ကူ၊ လုံခြုံ၊ အဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း ဒါမှမဟုတ် အခြား စက်ကိရိယာနဲ့ ငွေပေးချေနိုင်ပြီး အကြွေးဝယ်ကဒ် မလိုအပ်ပါ။
ယနေ့ခေတ် e-wallet သည် သင့်ပိုက်ဆံကို ခိုးယူနိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ငွေသိမ်းဆည်းရန် အလုံခြုံဆုံး နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ငွေအဝင်အထွက် အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် သင်၏ e-wallet ကို နည်းပညာဖြင့် encrypt ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ယခု လမ်းညွှန်ချက်တွင် Wave Money ဖြင့် Free Fire တွင် ငွေဖြည့်သွင်းနည်းကို လေ့လာရမည်။
Wave Money နဲ့ Free Fire မှာ diamond တွေ မည်သို့ ဝယ်ယူနိုင်မည်နည်း။
အဆင့် 1 – အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်တွင် နှစ်သက်ရာ e-wallet ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။
Wave Money ဖြင့် ငွေပေးချေရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
အဆင့်2– ဘောက်ချာ ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ။ (လဲလှယ် နှုန်းထားအတွက် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။)
အဆင့်3– သင်၏ ဝယ်ယူမှုကို စစ်ဆေးပါ၊ သင်၏ အီးမေးလ် လိပ်စာကို ဖြည့်သွင်းပြီး “အခု ဝယ်မည်” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ဝယ်ယူပါ။
အဆင့်4– သင်၏ ဘောက်ချာကုဒ်ကို ရရှိပြီးနောက် Garena ရယူရန် တရားဝင် ဝဘ်ဆိုဒ် သို့ သွားရောက်ပြီး သင်၏ Garena Shells ကို Free Fire diamonds အဖြစ် လဲလှယ်ပါ။
Garena Shells ဘောက်ချာကို အသုံးပြုပြီးနောက် Free Fire diamonds များသည် သင်၏ ဂိမ်းအကောင့် အတွင်းသို့ အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းပေးပါမည်။ Free Fire အက်ပ် အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး အထူးပစ္စည်းများကို ပျော်ရွှင်စွာ ဝယ်ယူလိုက်ပါ!
Garena Shells မှ Free Fire Diamond သို့ လဲလှယ်နှုန်းထား
Wave Money Free Fire ပရိုမိုးရှင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂိမ်းကစားသူများအားလုံးကို အကောင်းဆုံး စျေးနှုန်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း e-wallet မိတ်ဖက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပုံမှန် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူး ပရိုမိုးရှင်းတွေကို လက်လွတ် မခံဖို့ Codashop MM blog တွင် subscribe ပြုလုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook နှင့် Instagram တွင် follow လုပ်လိုက်ပါ။
Previous articleFree Fire မှာသုံးသင့်တဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Skin ၅ မျိုး
Next articleဘောက်ချာ – MPT, Ooredoo, Telenor နှင့် Mytel တို့ဖြင့် Free Fire ငွေဖြည့်သွင်းပုံ